Ungayilibali Eyona Mbambano Ibalulekileyo​—⁠Ulongamo LukaYehova | Efundwayo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI Cakchiquel (Western) IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISidama ISilozi ISpanish Intetho Yezandla YaseAngola Intetho Yezandla YaseCuba Intetho Yezandla YaseIndia Intetho Yezandla YaseKenya Intetho Yezandla YaseMerika Intetho Yezandla YaseSlovakia Intetho Yezandla YaseVenezuela Intetho Yezandla yase-Ecuador Intetho Yezandla yaseArgentina Intetho Yezandla yaseBolivia Intetho Yezandla yaseBrazil Intetho Yezandla yaseBritani Intetho Yezandla yaseChile Intetho Yezandla yaseColombia Intetho Yezandla yaseCzech Intetho Yezandla yaseFilipi Intetho Yezandla yaseFinland Intetho Yezandla yaseFransi Intetho Yezandla yaseGrisi Intetho Yezandla yaseHungary Intetho Yezandla yaseIndonesia Intetho Yezandla yaseItali Intetho Yezandla yaseJamani Intetho Yezandla yaseJapan Intetho Yezandla yaseKorea Intetho Yezandla yaseMalawi Intetho Yezandla yaseMexico Intetho Yezandla yaseOstreliya Intetho Yezandla yaseParaguay Intetho Yezandla yasePersi Intetho Yezandla yasePoland Intetho Yezandla yasePortugal Intetho Yezandla yaseQuebec Intetho Yezandla yaseRashiya Intetho Yezandla yaseRomaniya Intetho Yezandla yaseSpain Intetho Yezandla yaseTshayina Intetho Yezandla yaseZimbabwe Isi-Ibanag Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiAmis IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBashkir IsiBassa (saseCameroon) IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBoulou IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChol IsiChuvash IsiCibemba IsiCinyanja IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDigor IsiDouala IsiEdo IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFon IsiFrentshi IsiGa IsiGarifuna IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHiri Motu IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJula IsiKabiye IsiKannada IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKiluba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKurdish Kurmanji (SaseCaucasus) IsiKurdish Kurmanji (sesiCyrillic) IsiKwangali IsiKwanyama IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMam IsiMambwe-Lungu IsiMarathi IsiMaya IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMbunda IsiMingrelian IsiMixe IsiMongolia IsiMoore IsiMotu IsiMyanmar IsiNahuatl (saseCentral) IsiNahuatl (saseGuerrero) IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNahuatl (saseNorthern Puebla) IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNepali IsiNgabere IsiNgesi IsiNigerian Pidgin IsiNorway IsiNzema IsiOkpe IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPidgin (SaseCameroon) IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSesotho (South Africa) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTajiki IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTlapanec IsiTojolabal IsiTok Pisin IsiTongan IsiTotonac IsiTshayina SaseCanton (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseCanton (Esiqhelekileyo) IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUrhobo IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWelsh IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiKurdish Kurmanji isiZapotec (saseIsthmus)
“Ukuze abantu bazi ukuba wena, ogama linguYehova, nguwe wedwa Oyena Uphakamileyo phezu komhlaba wonke.”​—INDU. 83:18.
IINGOMA: 46, 136
Kutheni ukuthethelelwa kwendlela uYehova alawula ngayo kuyeyona mbambano ibalulekileyo ebantwini?
Ukungagungqi kukaYobhi xa wayevavanywa kwabonisa njani ukuba uyayixhasa indlela uYehova alawula ngayo; kodwa wawa nganeno njani?
Ziintoni ezibalulekileyo esimele sizenze ezibonisa ukuba sixhasa indlela uYehova alawula ngayo?
1, 2. (a) Yeyiphi eyona mbambano ibalulekileyo ebantwini? (b) Kubaluleke kangakanani ukuyiqonda?
EYONA nto ibalulekileyo kubantu abaninzi namhlanje yimali. Kukuba nezinto ezingakumbi okanye ukugcina ezo sele benazo. Kwabanye eyona nto ibalulekileyo yintsapho, impilo nokuphumelela.
2 Kodwa ke, eyona mbambano ibalulekileyo ebantwini, kukuthethelelwa kwendlela uYehova alawula ngayo. Sifanele silumke singayilibali indlela ebaluleke ngayo le mbambano. Yintoni enokusenza siyilibale? Sisenokuxakeka zizinto zethu zemihla ngemihla size sikulibale ukubaluleka kokuthethelela indlela uThixo alawula ngayo. Okanye ubunzima esibuvayo ngenxa yeemvavanyo sinokubuvumela ukuba busenze siyilibale. Kwelinye icala, xa ukuqonda kakuhle ukubaluleka kokuthethelelwa kwendlela uYehova alawula ngayo uya kutsho ukwazi ukuzinyamezela iimvavanyo zamihla le. Xa siyiqonda loo nto, siya kusondela nangakumbi kuYehova.
KUTHENI IBALULEKE KANGAKA?
3. USathana uthini ngolawulo lukaThixo?
3 USathana uMtyholi wenza abantu bathandabuze ukuba uYehova ubalawula kakuhle. Umi ngelithi ulawulo lukaThixo lunenyawo lwemfene, ibe ubavimba okulungileyo abantu. UMtyholi uthi abantu bangonwaba xa benokuzilawula, ibe iimeko zabo zinokuba ngcono. (Gen. 3:1-5) USathana uphinda athi akukho mntu unamathele nyhani kuThixo, ukuba nje banokuva ubunzima abayi kufuna ukulawulwa nguYehova. (Yobhi 2:4, 5) Ngenxa yezi zityholo zikaSathana, uYehova uye wayeka kwadlula ixesha ukuze abantu bazibonele ukuba kunjani ukuphila bengalawulwa nguye.
4. Kutheni kufuneka ilungiswe imbambano engendlela uThixo abalawula ngayo abantu?
4 UYehova uyazi ukuba ayikho le nto ithethwa nguMtyholi. Kutheni ke emnike ithuba elingaka ukuze angqine izityholo zakhe? Kungenxa yokuba abantu neengelosi zinendima ekuphenduleni ezi zityholo. (Funda iNdumiso 83:18.) Phofu ke, indoda nomfazi wokuqala zange bafune ukulawulwa nguYehova, ibe baye balandela nabanye abantu abaninzi. Ngenxa yoko, abanye babesenokucinga ukuba izityholo zikaSathana ziyinyaniso. Logama zisankenteza ezingqondweni zabantu okanye zeengelosi, izizwe, iintlanga, iintsapho nabantu baya kuhlala bengavani. Kodwa xa sele ithethelelwe indlela uYehova alawula ngayo, sonke siya kuzithoba ngonaphakade, silawulwe nguye ngobulungisa. Kuya kubakho uxolo emhlabeni wonke.—Efe. 1:9, 10.
5. Sinayiphi indima ekuxhaseni uYehova kwimbambano engendlela abalawula ngayo abantu?
5 Into yokuba uThixo ulawula kakuhle iza kucaca, ibe ulawulo lukaSathana nolwabantu alusoze luphumelele kwaye luza kupheliswa. UThixo uya kulawula esebenzisa uBukumkani BukaMesiya, ibe abo banamathele kuye baza kube beyingqinile into yokuba abantu banako ukuma ngakwicala likaThixo. (Isa. 45:23, 24) Ngaba ufuna ukuba ngomnye wabo baya kwaziwa ngokunamathela kuYehova nangokuxhasa ulawulo lwakhe? Ngokuqinisekileyo ufuna loo nto. Ukuze sinamathele kuThixo, kufuneka sisoloko sicinga ngale mbambano ibalulekileyo size siyiqonde indlela ebaluleke ngayo.
UKUTHETHELELWA KOLAWULO KUBALULEKE NGAPHEZU KOKUSINDISWA
6. Kubaluleke kangakanani ukuthethelelwa kwendlela uYehova alawula ngayo?
6 Njengoko sele kutshiwo, ukuthethelela indlela uYehova alawula ngayo yeyona nto ibalulekileyo ebantwini. Kubaluleke ngaphezu kolonwabo lwethu. Ngaba loo nto ithetha ukuba ukusindiswa kwethu akubalulekanga nokuba uYehova akasikhathalelanga? Akunjalo. Ngoba?
7, 8. Kutheni ukuthethelelwa kwendlela uThixo alawula ngayo kuquka nokuzalisekiswa kwezithembiso zakhe?
7 UYehova ubathanda kakhulu abantu ibe ubaxabisile. Wasebenzisa igazi loNyana wakhe ukuze sibe themba lokusindiswa. (Yoh. 3:16; 1 Yoh. 4:9) Ukuba uYehova ebenokungazizalisekisi izithembiso zakhe, uMtyholi ebeya kuthi ulixoki elibavimba okulungileyo abantu nelibalawula kakubi. Loo nto ibiya kwenza bamvuyelele nabachasi abahlekisa besithi: “Buphi obu bukho bakhe buthenjisiweyo? Kuba ukususela ngomhla ookhokho bethu abalala ngawo ekufeni, zonke izinto zisaqhubeka kanye njengasekuqaleni kwendalo.” (2 Pet. 3:3, 4) Ngoko, uYehova uza kuqinisekisa ukuba ukuthethelelwa kwendlela alawula ngayo kuquka nokusindiswa kwabantu abathobelayo! (Funda uIsaya 55:10, 11.) Ngaphezu koko eyona nto iphambili kulawulo lukaYehova, luthando. Ngoko simele siqiniseke ukuba uya kusoloko ebathanda yaye ebaxabisa abakhonzi bakhe abangagungqiyo.—Eks. 34:6.
8 Xa sivuma ukuba lubalulekile ulawulo lukaYehova, loo nto ayithethi kuthi ukusindiswa kwethu yinto engenamsebenzi okanye asixabisekanga kuye. Kunoko sibeka ulawulo lwakhe nokusindiswa kwethu kwiindawo zazo. Kubalulekile ukuba siyenze loo nto ukuba sifuna ukuhlala sicinga ngeyona mbambano ibalulekileyo nokuze sibonise ukuba sifuna ukulawulwa nguYehova.
FUNDA INDLELA YOKUJONGA IZINTO
9. USathana wathini ngoYobhi? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)
9 Into yokuba kufuneka sizijonge izinto ngendlela efanelekileyo siyibona ngokucacileyo kwincwadi kaYobhi, enye yeencwadi zeBhayibhile ezabhalwa kuqala. Kuyo sifunda ukuba uSathana wathi, ukuba uYobhi unokufumana ubunzima, uya kumlahla uThixo. USathana wathi uThixo makavise uYobhi ubuhlungu. UYehova akazange ayenze loo nto, kodwa wamvumela uSathana ukuba amvavanye, wathi: “Yonke into anayo isesandleni sakho.” (Funda uYobhi 1:7-12.) Ngexesha nje elifutshane, uYobhi wayesele engenazicaka, izinto zokuziphilisa nabantwana bakhe abathandayo abalishumi. USathana wenza yangathi nguThixo ngokwakhe oye wabangela ukuba uYobhi ehlelwe zezo ngxaki. (Yobhi 1:13-19) Emva koko, uSathana wenza uYobhi waba nesigulo esibuhlungu nesonyanyekayo. (Yobhi 2:7) Waba ngathi ugalelwa ityuwa enxebeni xa umfazi wakhe nabanye abathathu ababezenza ngathi ngabahlobo bathetha amazwi atyhafisayo kuye.—Yobhi 2:9; 3:11; 16:2.
10. (a) Yintoni awayenzayo uYobhi ebonisa ukuba wayenamathele kuThixo? (b) Kodwa wawa nganeno njani?
10 Waba yintoni umphumo? Izityholo zikaSathana zangqineka zibubuxoki. UYobhi zange avume tu ukumnikela umva uThixo. (Yobhi 27:5) Kodwa ke, uYobhi kangangexeshana wakhe akazijonga kakuhle izinto. Walibala kukuzama ukubonisa ukuba yena wayelilungisa, efuna ukuqonda ukuba kutheni esehlelwa zizinto ezibuhlungu. (Yobhi 7:20; 13:24) Singacinga ukuba kwakulindelekile ukuba enze loo nto ekubeni wayesehlelwa zizinto ezibuhlungu. Kodwa yena uThixo wabona ukuba kufuneka ayilungise indlela acinga ngayo. Wathini uYehova kuye?
11, 12. UYehova wamnceda waqonda ntoni uYobhi, ibe wenza ntoni uYobhi?
11 Amazwi uThixo awawathetha kuYobhi abhalwe kwizahluko ezine kwincwadi kaYobhi, kwisahluko 38 ukuya ku-41. Kuzo asimva uThixo exelela uYobhi ngokungqalileyo isizathu sokuba ehlelwe zizinto ezibuhlungu. Injongo kaYehova yayingekokucacisa isizathu sokuba uYobhi esehlelwa zizinto ezibuhlungu, ngokungathi kufuneka aphenduliswe. Kodwa wayefuna ukunceda uYobhi aqonde ukuba akabalulekanga kangako xa ethelekiswa nobukhulu bukaThixo. Wamnceda wabona ukuba kwakukho iimbambano ezibalulekileyo awayemele azikhathaze ngazo. (Funda uYobhi 38:18-21.) Loo nto yamnceda uYobhi wazijonga kakuhle izinto.
12 Ngaba uYehova wayeqatha kuYobhi ngokumngxolisa ekubeni wayenyamezele izinto ezibuhlungu kakhulu? Wayengekho qatha, ibe noYobhi wayibona loo nto. Nangona wayexhwalekile, waqalisa ukuthetha njengomntu oqondayo waza wabulela. Wade wathi: “Kungenxa yoko ndirhoxa, yaye ndiyaguquka ndiseluthulini naseluthuthwini.” Icebiso likaYehova elingqalileyo kodwa elihlaziyayo laba nelo futhe kuye. (Yobhi 42:1-6) Ngaphambilana, uYobhi wayeye walungiswa ngumfana onguElihu. (Yobhi 32:5-10) Emva kokuba uYobhi emmamele uThixo waza wayilungisa indlela azijonga ngayo izinto, uYehova wachazela abanye indlela awevuyiswa ngayo kukuthembeka kukaYobhi nangona wayevavanywa.—Yobhi 42:7, 8.
13. Icebiso likaYehova laliza kumnceda njani uYobhi nasemva kweemvavanyo?
13 Icebiso likaYehova laliza kumnceda uYobhi nasemva kweemvavanyo. Njani? Kaloku, nangona “uYehova wakusikelela ukuphela kukaYobhi . . . ngaphezu kwesiqalo sakhe,” kumele ukuba kwathatha ixesha ukuba izinto zibuyele esiqhelweni. Kamva “waba noonyana abasixhenxe neentombi ezintathu.” (Yobhi 42:12-14) Ngokuqinisekileyo uYobhi wayebakhumbula abantwana bakhe bokuqala ababulawa nguSathana. Kangangexesha elithile, kusenokwenzeka ukuba wayemane ezikhumbula izinto ezibuhlungu ezazimehlele. Nangona ekugqibeleni waqonda ukuba kwakutheni ukuze ehlelwe zezo mvavanyo, umele ukuba wayezibuza ukuba kwakuyimfuneko na ukuba ade eve ubuhlungu kangako. Nokuba wayecinga ntoni, wayenokuhlala ekhumbula icebiso likaThixo. Ukwenjenjalo kwakuza kumnceda ahlale ezibona ngendlela efanelekileyo izinto, ibe loo nto yayiza kumthuthuzela.—INdu. 94:19.
Ngaba uza kujonga iingxaki zakho uze ulibale eyona mbambano ibalulekileyo? (Jonga isiqendu 14)
14. Sifunda ntoni kuYobhi?
14 Kule ngxelo kaYobhi, sinokufunda ukuzijonga ngendlela efanelekileyo izinto size sithuthuzeleke. Ngapha koko, uYehova waqinisekisa ukuba iyagcinwa ukwenzela “ukuyalela thina, ukuze ngonyamezelo lwethu nangentuthuzelo yeZibhalo sibe nethemba.” (Roma 15:4) Sifunda ntoni? Eyona nto siyifundayo yile: Masingazikhathazi ngobomi bethu side silibale eyona mbambano ibalulekileyo, ukuthethelelwa kwendlela kaYehova yokulawula. Ibe sifanele siyiqonde into yokuba indima yethu kule mbambano ifuna ukuba sihlale sithembekile naxa iimeko zinzima, njengoYobhi.
15. Kusinceda ngantoni ukuthembeka kwethu xa sivavanywa?
15 Kutheni kuthuthuzela nje ukucinga ngokubaluleka kokuthembeka kwethu? Kungenxa yokuba ukunyamezela kwethu kufeza injongo enkulu. Iimvavanyo azibonisi ukuba uYehova akakholiswa sithi, kodwa zisinceda sibonise ukuba sixhasa ulawulo lukaThixo. (IMize. 27:11) Xa sinyamezela siye ‘sikholeke’ lize liqine nethemba lethu. (Funda eyabaseRoma 5:3-5.) Ingxelo kaYobhi ibonisa ukuba “uYehova unomsa omkhulu nenceba.” (Yak. 5:11) Ngoko sinokuqiniseka ukuba uza kusivuza thina nabo bonke abaxhasa ulawulo lwakhe. Ukwazi loo nto kuza kusinceda ‘sinyamezele ngokupheleleyo sivuya’ yaye sinomonde.—Kol. 1:11.
16. Kutheni kufuneka sizikhumbuze ngokubaluleka kokuthethelelwa kwendlela kaYehova yokulawula?
16 Kusenokuba nzima ukuhlala sicinga ngokuthethelelwa kwendlela kaYehova yokulawula. Iingxaki zethu zisenokusongamela ngamanye amaxesha. Nezo zincinane zisenokubonakala zinkulu xa sihleli sicinga ngazo. Ngoko, sifanele sihlale sizikhumbuza ngokubaluleka kokuxhasa ulawulo lukaThixo naxa sineengxaki ezinzima.
17. Ukuxakeka ngumsebenzi kaYehova kunokusinceda njani singayilibali imbambano ebalulekileyo?
17 Ukuxakeka ngumsebenzi kaYehova kunokusinceda sisoloko sicinga ngeyona mbambano ibalulekileyo. Ngokomzekelo, uRenee, oliNgqina, wayenesitrowukhu, eqaqanjelwa ngumzimba kwaye enomhlaza. Ngoxa wayenyangwa esibhedlele, wayeshumayela kubasebenzi, kwizigulane nakwabeze kubona izigulane. Kwesinye isibhedlele washumayela iiyure eziyi-80 ngeeveki nje ezimbini ezinesiqingatha. Naxa wayesele eza kusweleka, uRenee akazange alulibale ulongamo lukaYehova. Loo nto yamenza akaxakaniseka kangako.
18. Into eyenzeka komnye udade ibonisa njani ukuba kuyanceda ukuxhasa ulawulo lukaYehova?
18 Sifuna ukusoloko sicinga ngolawulo lukaYehova naxa sijongene neengxakana zemihla ngemihla. UJennifer wahlala kwisikhululo seenqwelo-moya iintsuku ezintathu elinde inqwelo-moya egodukayo. Awayeza kukhwela kuzo kwakusoloko kusithiwa azizukuba sahamba. Ekubeni wayeyedwa yaye ediniwe wayenokuvela azisizele. Kodwa wathandaza ukuze abone ukuba angabanceda njani abanye ababelapho bedikwe kukulinda. Waba yintoni umphumo? Washumayela kubantu abaninzi waza wahambisa iincwadi ezininzi. Uthi, “UYehova wandisikelela nangona ndandikwimeko endivavanyayo waza wandinika amandla okuphakamisa igama lakhe.” Wahlala ecinga ngenjongo kaYehova.
19. Abantu bakaYehova baba kweliphi icala xa kufikwa kumba wembambano yolongamo?
19 Ngabanquli bakaYehova kuphela abayiqondayo indlela olubaluleke ngayo ulawulo lukaYehova. Oku kuqonda kwahlula abakhonzi benene kwabobuxoki. Kudala abantu bakaThixo bengakwicala lakhe. Nathi njengoko sixhasa unqulo lwenene, ngamnye kuthi umele azimisele ukujonga izinto ngendlela efanelekileyo.
20. UYehova uziva njani xa uzama ukuma ngakwicala lakhe?
20 Siyakuqinisekisa ukuba uYehova uyayixabisa imizamo yakho yokuma ngakwicala lakhe ngokuthi uqhubeke uthembekile enkonzweni yaye unyamezela iimvavanyo. (INdu. 18:25) Inqaku elilandelayo liza kunaba ngesizathu sokuba sifanele sizame ngandlela zonke ukuma ngakwicala likaYehova, nokuba singaluxhasa njani ulawulo lwakhe.